HomeWararka CiyaarahaThomas Partey oo ku soo laabtay Tababarka kooxda Arsenal ka hor kulanka Everton
May 21, 2022 Wararka Ciyaaraha 0
Xiddiga khadka dhexe uga ciyaara kooxda Arsenal ee Thomas Partey ayaa laga soo duubay muuqaal uu dib ugu soo laabanayo tababarka kooxda ka hor kulanka muhiimka ah ee ay maalinta Axada ah kula ciyaari doonaan kooxda Everton garoonka Emirates.
Ciyaaryahanka dhaawaca ah ee Ghana ayaan ciyaarin tan iyo markii uu dhaawac ka soo gaaray kulankii guuldarada 3-0 ay ka soo gaartay Crystal Palace 4-tii April – waxa uu seegay Arsenal sideedii kulan ee ugu dambeysay Premier League.
Waqtigaas, Mohamed Elneny iyo Granit Xhaka ayaa inta badan ku lamaansaday bartanka beerta, Gunners ayaa laga badiyay afar halka ay badisay afar mar uu Partey maqan yahay.
Dhaawaca 28-sano jirkaan ayaa la filayaa inuu meesha ka saaro inta ka harsan xilli ciyaareedka, iyadoo Mikel Arteta uu rajo ka qabo inuu ciyaaro ka hor inta uusan ololaha dhamaanin.
Warbixin dhawaan soo baxday ayaa sheegtay in Partey uu sii maqnaan doono kulanka maalinta ugu dambeysa ee Toffees, laakiin tan iyo markaas ayaa lagu sawiray isagoo kubada cagihiisa ku jira tababarka.
Muuqaal gaaban oo laga sii daayay baraha bulshada ee Arsenal ayaa muujinaya Partey oo ka qeyb qaadanaya rondos-ka kooxda inteeda kale, halka uu sidoo kale dhoolatus ku saleysan kubad heysasho ku sameeyay London Colney.
Ciyaaryahankii hore ee Atletico Madrid ayaa u muuqday mid si lama filaan ah uga soo baxay kulanka, laakiin waa la arki doonaa hadii Arteta uu doonayo inuu halis geliyo booqashada kooxda Frank Lampard.
Partey waxa uu si joogto ah ula dhibtoonayay dhaawacyo tan iyo markii uu yimid caasimadda England – waxa uu seegay wadar ahaan 17 ciyaarood xilli ciyaareedkii hore sababo la xidhiidha muruqa, muruqa iyo sinta.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Ghana ayaa markaas ka dib dhaawac canqowga ah ka soo gaaray kulan saaxiibtinimo oo ay la ciyaareen Chelsea bishii Ogosto, waxaana uu seegay seddexdii guuldarro ee Arsenal ee xilli ciyaareedka Premier League ee Brentford, Chelsea iyo Manchester City.
Markii uu taam ahaa, Partey waxa uu isku dhigay inuu yahay ciyaaryahan muhiim u ah Arsenal bartamihii beerta, isagoo diiwangeliyay labo gool iyo hal caawin 24 kulan oo Premier League ah xilli ciyaareedka oo dhan.